विद्यार्थीलाई पढाउन शिक्षकका आ–आफ्नै तरिका हुन्छन् । आफूले पढाएका विद्यार्थीले सहजै बुझेर परीक्षामा लेख्न सकून् भन्ने चाहना हरेक शिक्षकको हुन्छ । कालिकोटका गणित शिक्षक सबराज बम तिनैमध्येका हुन्, जसले विद्यार्थीलाई गणितका सूत्र घोकाउन देउडा लयलाई माध्यम बनाएका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको मौलिक भाका हो, देउडा । देउडामा स्थानीय खस भाषाका शब्दहरू प्रयोग हुने भएकाले शिक्षक बमले गणितका सूत्र कण्ठस्थ गराउने नयाँ उपाय निकालेका हुन् ।
देउडा गीतको दुई लाइनमा धेरै सूत्र अटाउन सकिन्छ । देउडा बुझेका विद्यार्थीका लागि एक लाइन गीत कण्ठ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।
‘देउडा गीतको दुई लाइनमा धेरै सूत्र अटाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘देउडा बुझेका विद्यार्थीका लागि एक लाइन गीत कण्ठ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।’ विद्यार्थीले गणितका सूत्र कण्ठस्थ गर्न झन्झट मान्ने गरेको देखेर देउडा भाकामा तिनलाई ढालेको उनी बताउँछन् । ‘यो विधि प्रभावकारी भएको छ,’ उनी भन्छन् । उनले ‘गणित साहित्य’ नामको पुस्तक नै तयार पारेका छन् । सानो छँदा उनलाई पनि गणित विषय झर्को लाग्थ्यो । आफ्ना विद्यार्थीबाट त्यही झर्को हटाउन नयाँ विधि अपनाएका हुन्, उनले ।
कलाको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्न सफल भएकोमा उनी दंग छन् । उनको भनाइमा परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी गणितकै हुने गरेका छन् । लयबद्ध पढाइका कारण विद्यार्थी कठिन सूत्रहरू कण्ठस्थ गर्न सफल देखिएका छन् । अंकगणितको सरल हिसाबमा साना, मझौला र ठूला कोष्ठहरूको प्रयोग शिक्षक बमले देउडा गीतमा यसरी गरेका छन् :
छ भने मेल बन्दबाट सुरु सानो कोष्ठ
दोस्रोमा मझौला कोष्ठ तेस्रो ठूलो कोष्ठ
प्लसप्लस जोडिदिने माइनस घटाइदिने
क्रमशः नियममा रही चिह्न हटाइदिने
यस्तै, गणितको अनुपात र समानुपात हिसाब गर्ने विधिलाई उनले देउडामा यसरी लेखेका छन् :
दुइटाको तुलना गर्नु भनिन्छ अनुपात
धेरै–धेरै अनुपातलाई भन्ने समानुपात
अनुपात जनाउने भए दुईवटा थोप्लाले
समानुपात जनाउनलाई चारवटा थोप्लाले
योगफल शब्द भएपछि राशिलाई जोड्नु है
अन्तर शब्द भएपछि राशि घटाउनु है
तथ्यांकशास्त्रको सूत्रमा बमको देउडा गीत यस्तो छ :
तथ्यांक संकलन गरी व्याख्या पनि गर्ने
विश्लेषणको संश्लेषण ग्राफ चार्ट भर्ने
प्राइमरी आफैँ लिने सेकेन्डरी अरू
तथ्यांक नछुटोस् कुनै नदोहोरियोस् बरु
शिक्षक बमको गणित साहित्यले देउडाको संरक्षणमा समेत मद्दत पुगेको देउडा गीतका जानकार नेत्रराज शाही बताउँछन् । भन्छन्, ‘माया–प्रेमका विषयवस्तुमा मात्र आधारित देउडामा गणित साहित्यले नयाँ आयाम थपेको छ ।’ देउडा गीतको शैलीमा लेखिएका गणितका सूत्रहरू अध्येताका लागि पनि सहयोगी बन्ने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ल बताउँछन् ।
अंक र अक्षरलाई लयमा मिलाउन कठिन भए पनि गणित साहित्यले कठिन सूत्रलाई सजिलो र उदार बनाएर नयाँ यात्राको थालनी गरेको साहित्यकार डा. नवराज लम्साल बताउँछन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देउडा सबैले बुझ्ने भएकाले साहित्यमा गणितको प्रयोग नौलो भएको साहित्यकार तथा देउडा गीतका अभियन्ता कृष्णराज धमला बताउँछन् ।
को हुन् सबराज बम ?
कालिकोटको सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा जन्मेका सबराज बम खाँडाचक्र नगरपालिकास्थित पञ्चदेवल माविका प्रधानाध्यापक हुन् । गणित विषयमा एमएड गरेका उनी गणित शिक्षा परिषद् कालिकोटका अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका सचिवालय सदस्य र नेपाल शिक्षक महासंघ कालिकोटका सहसचिव हुन् । ०७१ सालमा उत्कृष्ट शिक्षक सेवा पदक पाएका उनी इन्टिग्रिटी आइडलको चौथो संस्करणमा उत्कृष्ट पाँचमा छनोट भएका थिए । फरक तरिकाले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावकारी विधि अपनाएका आधारमा उक्त प्रतिस्पर्धामा बम छनोटमा परेका थिए ।